आइतबार पनि सुनको मुल्य घट्यो, तोलाको कति तोकियो ? - सिम्रिक खबर
आइतबार पनि सुनको मुल्य घट्यो, तोलाको कति तोकियो ?
काठमाण्डौ । केही दिन देखी सूनको मूल्य निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । आइतवार पनि सूनको मूल्य घटेको छ । आज २१ गते आइतबार सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँले घटेको हो। यस दिन छापावाला सुन प्रतितोला ९६ हजार १०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला ९५ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो कारोबार दिन शुक्रबार सुन प्रतितोला ९६ हजार ४०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो ।
चाँदीको भाउ भने आइतबार वृद्धि भएको छ । आज चाँदी तोलामा १० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला एक हजार ३२० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । गत साताको मंगलबार एक हजार ३९५ रुपैयाँसम्म पुगेको चाँदीको भाउ त्यसयता भने गिरावट भएको देखिन्छ । मूल्य घटबढ भइरहेको भएपनि सुनचाँदीको कारोबार भने देशभर नै ठप्प छ ।